San Htun's Diary: ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၇
National Day Parade 2008 Firework
Saranghae ဆာရာငယ် အိုနီး :P - NDP 2008
မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ သူများနိုင်ငံတွေဆီမှာ Countdown တွေလုပ်၊ မီးရူးမီးပန်းတွေ ပေါက်ကွဲတာကို စလောင်းကနေ ထိုင်ရူစား။ ChannelNewsAsia က သတင်းထောက်တွေ သူတို့ ဘာသာစကား အသီးသီးနဲ့နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်ကြတာကို နားထောင်။ နှစ်သစ်ကူးချိန်ဆို သူငယ်ချင်းတွေဆီ ဖုန်းဆက်၊ လမ်းထဲက ဘဲသားကာလသားချက်လို့လာဝေတာတွေ၊ အကြင်နာတို့ အိမ်က ချက်တဲ့ မုန့် ဟင်းခါး၊ ဟော့ပေါ့တို့ ကို တီးရင်းပေါ့။ ဟော ၂၀၀၈ စလုံးလည်း ရောက်ရော ကျောင်းမှာ ပရောဂျက်တွေ ပိနေတာနဲ့ ဘယ်လို နယူးရီးယား၊ ခရစ်စမတ်လိုက်မှန်းတောင် မသိလိုက်ပါဘူး။
၂၀၀၉ ကျတော့ New Year Eve နေ့ တဝက် ရုံးတက်ပြီးလို့လျှော့ပင်းလိုက်တာ ည ၈နာရီမှ အိမ်ကို ပြန်ရောက်တယ်။ ဗြုန်းစားကြီး West Coast Beach မှာ သွား Countdown ကြတယ်။ Tent တွေ ဘာတွေလည်း မစီစဉ်နိုင်ပါဘူး၊ တာလပတ်ကြီး ယူ၊ ဘာဘီတွေလည်း မQနိုင်ပါဘူး။ KFC က ကြက်ကြော်တွေ ဝယ်၊ NTUC က ဘီယာ၊ ကုတ်တေးလို ဘီယာနဲ့အချိုရည် စပ်ထားတဲ့ ဟာတွေ ဝယ်ပြီး ချီတက်သွားတာ။ တို့ ညီအမရယ်၊ မခိုင်ရယ်၊ မခိုင်မောင်ဝမ်းကွဲ စန်းထွန်းနဲ့ဟိုင်းကြီးကျောင်းမှာ အတူတက်ခဲ့တဲ့ ဖိုးခွားရယ်။ ဟိုင်းကြီးသားအုပ်စုပေါ့။
စန်းထွန်း ၊ ဖိုးခွား ၊ မခိုင်
ပြောစမှတ်တွင်တဲ့ ညီအမ မကြီး ၊ စန်းထွန်း
ဟတ်ပီးနယူးရီးယား အော်ပြီးတာနဲ့စကားတွေ ပြောရင်း ညီအမနှစ်ယောက် tent လဲ မရှိဘဲ ပုဝါလေးတွေ ခြုံပြီး ကွေးကြတော့တာပဲ။ တနေကုန် လျှော့ပင်းထားကြတော့ ခြေထောက်တွေ တောင့်နေပြီကိုး။ ဘေးနားမှာ ရွှေမြန်မာ တအုပ်က tent ထိုးကာ ဂီတာတီး သီချင်းဆိုကြတာ ချော့သိပ်နေသလို။ မနက်၅နာရီထိုးလို့မခိုင်နှိုးမှ နှိုးကြတော့တယ်။ မခိုင်က ဒီညီအမ ငါ့မနှိုးရင် ဘယ်အချိန်ထိများ အိပ်မလဲလို့မနှိုးဘဲ ထားချင်လိုက်တာတဲ့။ ဖိုးခွားကတော့ မိန်းကလေး၃ယောက် အိပ်နေတာကို စောင့်ရလို့ဘီယာတောင် မမူးလိုက်ရ။ ရှူးရှူးတောင် တို့ ညီအမနှစ်ယောက် အိပ်နေတာကို မခိုင်နဲ့အိပ်ဖန်စောင့် ဂျူတီချိန်းပြီးမှ သွားရတာဆိုပဲ။ အဲဒီနှစ် နယူးရီးယားကြိုတာလေးကိုတော့ မှတ်မှတ်ရရ လွမ်းမိပါတယ်။
၂၀၁၀ နှစ်သစ်ကိုတော့ MarinaBay မှာ သွား Countdown တယ်။ လူအင်အား တောင့်တောင့်နဲ့ ပေါ့။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ နယ်မှာ ရွှီဒိုင်းတွေ၊ မီးရူးမီးပန်းတွေ ဖောက်ကာ ပျော်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြို့ရောက်တော့ ဗျောက်အိုး၊ မီးရူးမီးပန်းဖောက်ရင် ထောင်၃နှစ်ဆိုတော့။ စလုံးရောက်မှ ဒီလိုမျိုး မီးရူးမီးပန်းတွေ ဖောက်တာ မြင်ဖူးတာဆိုတော့ ပျော်လိုက်တာ။ National Day Parade မှာ ဆိုရင်လည်း မီးရူးမီးပန်းတွေ ဖောက်တာ တအားလှပါတယ်။ အပြန်ကျတော့ လူအုပ်ထဲ တရွေ့ ရွေ့စီးမျောရင်း။
အန်တီ ခင်စန်းမြင့်၊ မကြီး၊ ပြုံးမြတ်၊ စန်းထွန်း၊ ချောတဲ့ အန်တီ (နာမည်ရင်း မမှတ်မိပါ)
၂၀၁၁ နယူးရီးယားကတော့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း မရှိ ပရိတ်တရား နားယူရင်း ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကို ပရိတ်တရားနာရင်း ကြိုတယ်ဆိုတော့ စန်းထွန်းတယောက် ဘာသာတရားကိုင်းရှိင်းလိုက်တာလို့ထင်တော်မမူလိုက်ပါနဲ့ နော်။ အပြင်မှာ လေတိုက်နေတာက တော်နေဒိုအလား။ မာလာ၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကြုံဖူးတဲ့ စန်းထွန်းတယောက် လေတွေ တအားတိုက်နေရင်ပဲ အမြီးတုန်အောင် ကြောက်တာပါ။ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပရိတ်တရား ဖိနားထောင်နေတာဗျား။ ဒီရောက်မှ စိတ်တွေဖိစီးလို့အိပ်မပျော်ရင် တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ရဲ့ပရိတ်တရား၊ မင်းကွန်းဆရာတော်ရဲ့ဓမ္မစကြားတရားတွေကို ဖုန်းထဲထည့်ထားက နာလေ့ရှိပါတယ်။ အိပ်ပျော်သွားရင်တော့ နတ်တွေ ဆက်နာပေါ့။ အပူတွေကို တရားရေအေးနဲ့ ငြိမ်းရတာလား။
ဆူနမ်၊ရာမားတို့ နဲ့ချက်တော့လည်း သူတို့ လည်း ဘယ်မှ မသွားပါဘူးတဲ့။ ညည်းတို့ က ဘော့စတွန်မြို့တော်ကြီးမှာနေပြီး ဘယ်မှ သွားCountdownဘူးလား ဟ ဆိုတော့။ စန်းစန်း ဒီမှာ ကားမောင်းရတာ အရမ်းကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ တနေ့ က ရာမား ရုံးကအပြန် မီးပွိုင့်မှာ ကားကွေ့ လို့မရလို့ တဲ့။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမမှာဆိုတော့ ကားတွေဆို ပွမ်လိုက်ကြတာတဲ့။ မန်နေဂျာကတောင် ကားမောင်လိုင်းစင်ရှိရဲ့ လားလို့လာမေးယူရတယ်။ မီးပွိုင့်မှာ ဘယ်လိုကွေ့ ရမှန်း မသိလို့ ။ တခါကလည်း ဆူနမ် အင်တာဗျူးသွားတာ ၁နာရီခွဲတိတိ နောက်ကျလို့ဖျက်လိုက်ရတယ်။ အင်တာဗျူးမတိုင်ခင် စောစောသွားရမှာ ညည်းက ဘာလို့နောက်ကျရတာလဲအေ့ဆိုတော့ ရထားက မိနစ်၂၀ နောက်ကျ၊ ရထားတွေ ပြောင်း၊ ရုံးခန်းရှာတာလည်း လည်နေလို့အိမ်ပြန်ရောက်တာ ကံကောင်းဆိုပဲ။ နယူးရီးယားကို ဒီလို ကြိုဆိုတာဆိုပြီး ဘီယာနဲ့ဝိုင်ကို မြှောက်ပြတယ်။ စန်းစန်း အတူတူ သောက်ရအောင်တဲ့။ ဘီယာတော့ ရှိဘူးအေ။ ဘီယာနဲ့တူတဲ့ Green Tea ရှိတယ် ဆိုပြီး Cheers လိုက်ကြသေးတယ်။
သောက်ကြဦးမလား Green Tea ဘီယာ :P
မိုင်းနဲ့တွေ့ သေးလားဆိုတော့ အွန်လိုင်းတောင် မတက်နိုင်အောင် သူ့ ဘဲဘဲနဲ့ဘီးစီးနေတယ်တဲ့။ Friend Gathering ဆိုပြီး ဘော့စတွန်သွားရင်ဖြင့် Friend လည်း မGatheringရ ၊ ကားမောင်းရတာ အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဆူနမ်၊ရာမားက ဘယ်မှ လိုက်ပို့ မှာ မဟုတ်။ အမယ်မင်း ကံသီပေလို့ဘော့စတွန်သွားပြီး ဖလမ်းဖလမ်းထဖို့ကြံစည်တာတွေ။
ဆူနမ်က အလုပ်က ကံပေါ်လည်း မူတည်လို့ဆိုလာပါတယ်။ အလုပ်အမြန်ရအောင် ညည်းတို့Genesha နတ်ကို ဆုတောင်းလေ။ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း၊ အမြဲရှိခိုးတဲ့ ရာမား အလုပ်အမြန်ရတာကြည့်ဆိုတော့ အဲဒါဆို မိုင်းရောတဲ့ ဆူနမ်က ပြန်ပက်တယ်။ မိုင်းက ဘာသာမဲ့။ အဲ..အဲ...သူကတော့ too smart လို့အလုပ်ရတာ။ မိုင်းက Algorithms ကို B ရတာလွဲရင် ကျန်တာအားလုံး A ၊ A- ရတဲ့ A ကျောင်းသားပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူမသိတာ မရှိတဲ့ မာစတာဘရိန်း။ စန်းထွန်း၊ ဆူနမ်၊ ရာမားတို့ ကို မိုင်းပဲ သင်ပေးတာပါ။
ပဲအပဲပေးလွန်နေတဲ့ မိုင်း၊ စန်းထွန်း
အစာမကြေတဲ့ ကိစ္စလေးကို ဆူနမ်၊ ရာမားတို့ နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပါတယ်။ MBA က နိုက်ဂျီးရီးယားသူ Monica က စန်းစန်းတို့ကားမောင်းလေ့ကျင့်ရင် သူ့ ကို ခေါ်ပါလို့ဆိုလာတယ်။ တခါခေါ်တော့ သူမအားလို့မလာနိုင်ဘူး။ ခုကျောင်းပိတ်ရက်မှာ Yanzi ကို သင်ခိုင်းတယ်။ တနေ့ တော့ စန်းထွန်း ကားမောင်းလေ့ကျင့်တာ လိုက်ရင်း သူလည်း မောင်းကျင့်ပါတယ်။ သူက ခုမှ ကားမောင်းသင်နေတာကိုး။
စန်းထွန်း ကားမောင်းကျင့်တာ သူလိုက်ချင်ပေမဲ့ အားတဲ့အချိန်မှ ငေါက်ခနဲ ထမောင်းတတ်တော့ မဆုံဖြစ်ဘူးပေါ့။ ကားသော့ပေးပါလားလို့တောင်းလာပါတယ်။ အိုး..ကေ.. အို..ကေ ဆိုကာ အသံလေးတုန်တုန်၊ မျက်နှာလေး အိုအို၊ မပေးချင်ပေးချင်နဲ့ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ကားသော့ ပြန်လာပေးတော့ စန်းစန်း နောက်အပတ် ကားမောင်းလိုင်စင် သွားဖြေရင် သူ့ ကို ခေါ်ပါတဲ့။ ဘယ်နေ့ ဖြေမလဲ appointment မလုပ်ရသေး၊ ဘော်ဒါ ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိပြီးသား ပန်ဒါတွေ အဖော်လိုက်ပေးချင်မှန်း မသိသေးလို့မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ ကို ခေါ်ပါတဲ့။ မနက် အစောကြီးထပြီး လိုက်ပေးတဲ့ ဘော်ဒါတွေက စန်းထွန်းမို့ လို့လိုက်ပေးတာလေ။ သူတို့အစောကြီးထရတာကို ကိုယ်က အားနာနေတာ။ သူ့ အတွက်ပါ လုပ်ပေးဆိုတော့ အားမနာနိုင်တော့ဘူး ရှင်းရှင်းပဲ နိုးလို့ငြင်းလိုက်တော့တယ်။
ဘယ်နှယ့်တော် ကားလည်း ငှားရသေး၊ သူငယ်ချင်းပါ ငှားရဦးမယ်။ မုန့် သာ ဝေစားနိုင်တယ်၊ သူငယ်ချင်းတော့ ဝေမစားနိုင်ပါဘူးတော် :D ။ Yanzi နဲ့သွားတိုင်ပင်တော့ ကားမငှားနဲ့လွန်လွန်းတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။ ဆူနမ်တို့ ကို ပြောပြတော့ ကားတခုခုဖြစ်ရင် နင်ပဲ ပေးရမှာနော်။ သူက ရှယ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ လည်း ဘရိတ်အတွက် ၄၀၀ ထွက်သွားဖူးတယ်။ တခုခု တိုက်မိရင် ကားအာမခံက ဈေးအနည်းဆုံး အာမခံ။ ဘာမှ ကာဗာမဖြစ်ဘူး။ အေး မငှားနဲ့ လို့မပြောချင်ဘူး။ ပိုက်ဆံထွက်ချင်ရင် ငှား။ ဘယ်လို စကားလှလှ ငြင်းရမလဲဆိုတော့ ဘာမှ ရှင်းပြမနေနဲ့ ။ I am sorry. No လို့ သာပြော။ No means No တဲ့။
Miss Nepal ရာမား၊ Miss Vietnam မိုင်း
သူတို့ တောင် စီနီယာ Asmita နဲ့ညီအမလို ဒီလောက်ခင်တာတောင် သူ့ ကားကို သော့ပေးလို့မတောင်းဘူး။ Monica ရဲ့attitude ကို မကြိုက်ဘူး။ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေဆီမှာ ကားရှိပေမဲ့ တခါတလေဆိုရင် ငှားလို့ ကောင်းပေမဲ့ အမြဲလေ့ကျင့်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ကားကို စုစပ်ပြီး ဝယ်ကြရတာပါပဲ။ အလကား ကားကို ကပ်မောင်းလေ့ကျင့်တဲ့အပြင် ကားပိုင်ရှင်တွေကိုပါ သူ့ ကို အဖော်ပြုခိုင်း ကားမောင်းသင်ခိုင်းတာ လွန်လွန်းတယ်။ She is too smart. Says No လို့ဆိုလာပါတယ်။
အာရိယန် တောင်းဆိုလို့Wall Mart ကို လိုက်ပို့ ပေး၊ ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိတဲ့ အာရိယန် ရှိနေတုန်း ကားမောင်းလေ့ကျင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ Tomorrow ၊ ဆီဖြည့်နေရင်း နီပါလီလို ပြောလို့သူ့ ရှေ့ မှာ နီပါလီလို မပြောနဲ့ဆိုပြီး အာရိယန် လူပါးဝတုန်းကတော့ ငြိမ်ကုပ်နေတဲ့ နှစ်ကောင်သား ခုတော့ တညီတညွှတ်တည်း နိုး..နိုး..နိုး..လို့ဆိုလာတော့ ပြုံးမိသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက မိုင်းနဲ့ စန်းထွန်း အာရိယန်ကို လူပါးဝတယ်ဆိုပြီး အမြင်ကတ်ခဲ့ကြသလို ခုလည်း မိုနီကာ လူပါးဝတယ်ဆိုပြီး ဆူနမ်နဲ့ရာမား အမြင်ကတ်နေလေရဲ့ ။
ကားကောင်းပိုင်တဲ့သူတွေက တခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့မငှားပါဘူး။ ဆူနမ်တို့နီပေါ၅ယောက်စပ် ကားဝယ်ထားတာဆိုတော့ ဂင်္ဂါဘ်ာဒါမို့ လို့ ၊ ဆူဘ ဘော်ဒါမို့ လို့ ၊ ရာဂျတ်ဘော်ဒါမို့ လို့ နဲ့ဒီကားကို ငှားလိုက်ကြတာ ဖေဖေါ်ဝါရီ Entry မှာ ဒီကား မစီးဖူးတဲ့ ကျောင်းသားဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်။ အားလုံးကလည်း ပတ်သက်ရာ မကင်းရာမကင်းကြောင်း တတန်းတည်းသားတွေကိုး။
အိန္ဒိယ Navatritri ပွဲတော်တွင် သရဲနှစ်ကောင် မိုင်း၊ စန်းထွန်း ဂိုက်ပေးကြမ်းနေကြပုံ
ကားကလည်း အပြင်ပန်းတာ စုတ်တာ၊ စက်ကတော့ အင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုပဲ (ဈေးသည်ကြီး ဆူနမ်လေသံနဲ့ပြောလိုက်စမ်းမယ်)။ မိုင်းရဲ့ ကားဆိုရင် ၂၀၀၀ ပေးရပြီး တလတခါလောက် စက်ပြင်ဆိုင်မှာ သွားအနားယူတတ်တယ်။ ဒီလို လက်မလည်အောင် ငှားနေရာက ဆူနမ်၊ရာမား၊ဂင်္ဂါ လိုင်စင်ရရော ကားကို ရောင်းတော့တာပါပဲ။ မရောင်းရင်လဲ အငှားလိုက်ရလွန်းလို့ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေတော့မှာကိုး။ စန်းထွန်း ယူမယ် သေချာတာလို့ပိုက်ဆံစတိလေးပေးတာနဲ့ကားကို လွှဲတော့တာပဲ။ ငါ့လက်ကလွှတ် ပြွတ်။
ဘယ်သူမှ ကိုယ့်အချိန်ကို သူများအတွက် မပေးချင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းအရင်တွေတောင် အားမှ အဆင်ပြေမှ လုပ်ပေးတာကိုး။ နေမကောင်းတဲ့နေ့ ကလွဲရင် စန်းထွန်း ကားမောင်းမသင်ချင်ရင်တောင် ဆူနမ်က အတင်းသင်ပေးတာ။ သူတို့ ကားကို ပိုက်ဆံတပြားမှ ပေးစရာမလိုဘဲ ဆီပဲဖြည့်။ ဆီပိုထည့်ရင်တောင် ရာဂျတ်အတွက် ထည့်ပေးတာလားလို့ဆူနမ်က ဆူတာ။ ဆူနမ်၊ မိုင်း တယောက်တလှည့် စန်းထွန်းကို ကားမောင်းသင်ပေးကြတာပါ။ ဂင်္ဂါပါ အကောင်းမနေရ။ သူတို့ကျောင်းကနေထွက်သွားတော့ တော်တော် မောင်းတတ်နေပြီ။
လိုင်စင်ဖြေမဲ့နေ့ မတိုင်မှီ ၁နာရီလောက် ကားမောင်းလေ့ကျင့်ရင် Yanzi လိုက်ပေးပါတယ်။ သူများ ကားမောင်းနေတာ ဘေးကနေ အဖော်လိုက်ပေးရတာ အတော်ပျင်းစရာကောင်းတာ။ ကိုယ်ကသာ မောင်းကျင့်နေလို့မသိတာ။ Yanzi ကိုလည်း အားနာလှပါတယ်။
စန်းထွန်းရဲ့စီးတော်မြင်း အဲလေ ဖွတ်ချက် ဖွက်ချက်ကား ၊ ဘေးတံခါးတွင် ဘယ်တုန်းက ဝင်အောင်းထားမှန်း မသိ ပိန်နေသည်၊ မိုးရွာရင် ဖွေးသန့် နေပြီး မိုးမရွာရင်တော့ နံသာရောင် ထွက်သည်၊ အတွင်းအားကောင်းသော ဆူနမ်ကြောင့် တံခါးလော့က ကားမောင်းသူဖက်က လော့ချ၍ မရ၊ ရေသုတ်တံက အရေးကြီးတဲ့ ကားမောင်းသူဘယ်ခြမ်းကို မသုတ်၊ ညာဖက်ကိုသာ သုတ်သည်။ သို့ ပါ၍ မိုးရွာထဲ ကားမောင်းလျှင် ကားမှန်ကို တစ်ရှူးနှင့် သုတ်ကာ wiper တာဝန်ကို ကားမောင်းသူဘေး ထိုင်သူက တာဝန်ယူရသည်။ သြော် ကားဝယ်ပြီးတော့ ကြွားချင်တာ ငါ့ကား ငါ့ကား....
ကားငှားလိုက်ရင်လည်း သိတတ်တဲ့သူကတော့ ဆီဖြည့်ပေးပေမဲ့ မသိတတ်တဲ့သူ(အများစု)ကတော့ ဆီလုံးဝမကျန်အောင်ပါ မောင်းပစ်လိုက်တာမျိုးတွေ ကြုံရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းလည်းမဟုတ် ကားကိုလည်း ယူသုံးချင်တဲ့အပြင် သူ့ ကိုပါ သင်ပေး၊ ကားမောင်းလိုင်စင် သွားဖြေရင်လည်း သူ့ ကိုပါခေါ်၊ ကိုယ့်အတွက် မနက်စောစောထလိုက်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုပါ သူ့ ကိုစောင့်ခိုင်း။ ကားရော၊ လူပါစိုက်။ ဒီလို လူမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ ရတော့ စိတ်ရှုပ်ရပါတယ်။ အားနာသင့်မှ နာပြီး နိုးသင့်ရင် ပြတ်ပြတ်သားသား နိုးတတ်ရပါမယ် ပိတ်သတ်ကြီး :P။
သြော် ကား..ကား..မရှိပြန်တော့လည်း ဒုက္ခ။ ရှိပြန်တော့လည်း ဒုက္ခ။ လိုင်စင်မြန်မြန် ရပါစေ ။ လိုင်စင်ရပြီးတဲ့နေ့ကားကို ရောင်းပြီပဲ။ ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်၊ တွေ့ တိုင်းမေး၊ ကိုယ့်ဖြည့်ထားတဲ့ ဆီတွေသုံး၊ မအားရတဲ့ကြားထဲ ကားမောင်းသင်ခိုင်းနဲ့နားပူလွန်းလို့လိုင်စင်ရပြီးတာနဲ့ကားရောင်းပြီး လမ်းပဲ လျှောက်တော့မယ်။ နားညည်းတော့ ခံနိုင်ဘူးအေ..ခြေထောက်ညောင်းပဲ ခံတော့မယ်။
(မိုင်း၊ရာမားတို့ဓာတ်ပုံတွေ ပြန်တွေ့ လို့ပို့ စ်နဲ့မစပ်မဟပ် တင်လိုက်ပါတယ်။ နောင် သူငယ်ချင်းချင်းတွေနဲ့ အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်မှန်း မသိလို့အမှတ်တရအဖြစ် ဒိုင်ယာရီမှာ သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ သည်းခံကာ ကျော်ခွပြီး ဖတ်ကြပါကုန်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်စရာအစား စိတ်ညစ်စရာတွေ ဖတ်ရလို့ညစ်သွားပါသလား။ တွေ့ ပုချီ၊ ဘီရာနဲ ပါနော်။
ဘီရာနဲဆိုတာ မသိသူများ ဘီရာသောက်တာနဲနေရင် များများထပ်သောက်ပါဟု ဆိုလိုပါသည် :P)
အားလုံးပဲ နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၁။
အားမနာတတ်တဲ့သူကို အားနာရင် နောင်လည်းပြဿနာဖြစ်မှာဘဲ။ ကိုယ်လည်း စန်းထွန်းသူငယ်ချင်းတွေဘက်ကဘဲ။း)
ဆုံးရယ်....၊No means No ဆိုတာလေးသဘောကျသွား
ကားမောင်းသူဘက်ကလော့ ပျက်နေတာကတော့ အရေး
ဆို ခုန်ထွက်လို့ရအောင်ထင်ရဲ့....:P။ အင်း...ကားမောင်း
လိုင်စင်လည်းရရော ကားလည်းပြန်ရောင်းပြီး လမ်းပဲ
ဂျက်ဂျက် လာမောင်းပေးမယ်ဆိုလို့အမြန်ရောင်းမှ...:P
ကျော်ခွပြီးဖတ်ဖို့ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်မှာမှ လာရေးထားတယ်။း)
ကားကတော့ ဂွတ်ရှယ်ထင်တယ်။ သူ့ကားသူ ချီးကျူးထားတာတွေ များလွန်းလို့။ ဟာ ဟ။
စန်းထွန်းကားက တံခါးဖွင့်ရင်း လက်မောင်းသားအလှလေ့ကျင့်ရအောင်2in 1 လုပ်ထားတာဖြစ်မှာပေါ့...ကားမောင်းရင်း တစ်ရှူးနဲ့သုတ်ပေးနေရတာတော့ မနိပ်ပေါင်ကွယ်...ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာ ခုံတစ်လုံးတပ်ထား လူတစ်ယောက်ကို အဲဒီပေါ်မှာ ထီးဆောင်းထိုင်ခိုင်းပြီး တံမြက်စည်းလှဲရင်း လိုက်ခိုင်းတာကမှ သက်သာလိမ့်ဦးမယ်းးး)))
ရာမားနဲ့ မိုင်းကို အခုမှ သေသေချာချာပြန်ကြည့်မိတယ်...ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတော့်ကိုဆင်တာပဲ...
အိုခေ...နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေဗျား...ဘီယာများ...( ဘာရယ်မှန်းတော့ မသိပေါင်...စန်းထွန်းက ဘီယာနဲဆိုလို့ ချထည့်လိုက်တားးး))
ဘယ်သူများ ဘီရာနဲဆိုတာ မသိလဲလို့စောင့်နေတာ ဦးဟန်ကြည် ဖြစ်နေပါရောလား..ဘီရာနဲဆိုတာ ကိုရီးယားလို I am sorry လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်
ကားက လန်းတယ် အစ်မစန်းထွန်းရေ။ မောင်မောင်တို.၀ယ်စီးနိုင်ဖို.တော်တော်ကြိုးစားရအုန်းမယ် ထင်တယ် ဟိဟိ ။ပျှော်ရွှယ်ဖွယ် နှစ်သစ်လေးပါ။
မမမြသွေး same to u
စတိတ်ကို လာခဲ့ မောင်မောင်ရေ တခါတည်း ကားပေါ်က မဆင်းရ ဖြစ်သွားမယ်.:P
ဂရင်းတီးဘီင်္ယာဆိုလို့ မျက်လုံးလေးတောင် အရည်လဲ့သွားတယ် စိတ်ဝင်စားသွားတာလေ ဟိဟိ
ဟိုတလောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ငါ ပလောင်ဘီယာသောက်နေတယ် ဆိုတော့ သူက အဲဒီ ဘီယာက ပြင်းသလားတဲ့ သောက်ရင် မူးသလားတဲ့ ..း)
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ပါနော်.. ဆန္ဒအားလုံး ပြည့်ဝပါစေလို့..
မင်္ဂလာ ရှိပြီး စန်းထွန်း ရဲ့ ကောင်းသော လို ရာဆန္ဒများပြည့် စုံသော ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းသော ကံကောင်း ကျန်းမာသော ၂၀၁၂ ဖြစ်ပါစေ လို့ ဆုတောင်း ပေး ပါတယ် စန်းထွန်းရေ ။
ဟောင်ကောင် အကြောင်းမေးထားတာ ကို ပြန်ဖြေပေးတာ ခုမှဘဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရတော့မယ် ။ အမ ဘလော့ ကို လာအားပေးတာ လဲ ကျေးဇူးပါနော် ။ နေ့ ဘက် ရုံးမှာ အလုပ်လုပ် ညဘက် ပတ်တိုင်းလုပ် အိမ်မှူ ကိတ်စေ တွ လဲ လုပ်ရသေးတာမို့ ဟောင်ကောင် ပို့စ် ကတော့ လာမည် ကြာမည် ပေါ့ ကွယ် ။ အမ က သိပ် လဲ မရေးတတ်ပါဘူး ။ စန်းထွန်း ရဲ့ ဘလော့ လေး ကတော့ လူငယ်သဘာဝ ပျော်စရာလေးတွေ စိတ်ဝင်စားစရာ ဒေသ အကြောင်းအရာ လေးတွေ နဲ့ မို့ အသစ်ပို့လေးတွေ့ ရင် ၀မ်းသာအားရ လာဖတ်တာပါ ။ မန့်သာ မမန့် ဖြစ်တာ ပါ ။ ဖတ်ပြီး စန်းထွန်း ကို အမသမီးလေးဆို ကောင်းမှာဘဲေ တွးမိသလို အမ သမီးလေးကိုလဲ စန်းထွန်းလို တော်ရင် ကောင်းမှာဘဲ လို့ လဲ တွေးမိပါတယ် ။ ချစ်တဲ့ အမ မယ်သံ
မမယ်သံရေ..ဟောင်ကောင်ပို့ စ်လေး မအားလို့မရေးရင်တောင် ဓာတ်ပုံလေးတော့ တင်မှပေါ့.ဒစ်စနေလမ်း မရောက်ဖူးလို့ကြည့်ချင်နေတာ..
မတော်ပါဘူး အမရယ်.. အေတခါလေး ရဖူးတယ်..ဘီရလိုက်..ဘီမိုင်းနပ်ရလိုက်နဲ့ဂျွှမ်းပစ်နေတာ..
ကောင်းတယ်၊ နိုးပစ်လိုက်...၊း)
တချို့လူတွေရဲ့ စရိုက်က ‘ငါ တောင်းကြည့်မယ်၊ ရရင် အမြတ်..၊ မရရင်လည်း ဘာမှ အရှုံးမရှိဘူး၊ If you don't try, you'll never know’ ဆိုပြီး နိတိတွေ၊ လေးစားမှုတွေ ဘေးချိတ်တတ် ပါတယ်၊ အခုလိုမျိုး အားမနာဘဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောတာ အကောင်းဆုံး ပါပဲ၊ ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ ညီမ စန်းထွန်းရေ..။
ဂရင်းတီးဘီင်္ယာဆိုလို့ မျက်လုံးလေးတောင် ပြူးသွားတယ်ဘာများလဲ
စန်းထွန်းရဲ့ ပိုစ်လေးရော ကွန်မန့်တွေကြောင့်ပါ ပြုံးရတယ် ဒါကြောင့် နောက်ကျမှ ရောက်ရောက်လာတာ ..:):) Happy New Year ပါ စန်းထွန်းရေ.